Rakipahalalana momba ny fitaterana kodiaran-droa
Ahoana no hanatsarana ny cadence amin'ny bisikileta?
Sokajy: ilaina 0
Ahoana no hahazoana cadence pedaling tsara? Ny tena soso-kevitra mba hahazoana cadence mahomby dia ny mijanona eo anelanelan'ny 80 sy 100 revolisiona isa-minitra. Tsarovy fa…
Nanontany ianao hoe: Ahoana ny fisafidianana seza bisikileta mahazo aina?
Ahoana no mifidy seza bisikileta? Refesina ny sakan'ny taolanao. Ny sakan'ny lasely dia miankina amin'ny…
Nanontany ianao hoe: Ahoana no hahatonga ny seza bisikiletanao tsy handratra?
Inona no haavony mety amin'ny seza bisikileta? Ampitomboy 0,88 izany halavirana izany: satria araka ny fandinihana biomekanika ny haavon'ny lasely marina dia ny…
Valiny haingana: Inona ny moto Z farany indrindra?
MOTO Z4 6,4-inch OLED DISPLAY (19:9) Full HD+ resolution (2.340 x 1.080 pixels) PROCESSOR Qualcomm Snapdragon 675 RAM 4 GB STORE 128 GB + microSD hatramin'ny 2…
Ahoana no ampiasana ny herin'ny fandehanana mandeha amin'ny bisikileta?
Valiny: Fanazavana: misy ny fironany mandeha amin'ny piston, izany hoe "manitsaka" ny pedal avy any ambony ka hatrany ambany ka mifandimby tongotra. Ny marina dia…
Ohatrinona ny fiantohana moto voalohany?
Inona no fiantohana moto mora indrindra ho an'ny tanora? Toy ny amin'ny mombamomba ny ambiny, ny fiantohana môtô mora indrindra dia ny atolotry ny…
Adiny firy isan-kerinandro ny mpitaingina bisikileta?
Adiny firy no manofana mpitaingina bisikileta matihanina isan-kerinandro? 6-8 ora isan-kerinandro dia mety ho ampy! Misy ny finoana miely patrana fa mba hanana haavo tsara…
Inona no sakafo maraina ho an'ny hazakazaka am-bisikileta?
Inona no hohanina mandritra ny fitsapana bisikileta? Eo amin'ny hazakazaka Rehefa eo amin'ny bisikileta isika, dia tsara ny mihinana sakafo maivana isaky ny 45 minitra na isan'ora….
Valiny haingana: Mandra-pahoviana ny fahazoan-dàlana amin'ny bisikileta federaly?
Ohatrinona ny vidin'ny fahazoan-dàlana mitaingina bisikileta federaly? Ny fahazoan-dàlana federativa any Espaina dia manodidina ny €120-130 isan-taona ary ahafahanao miditra amin'ity platoon ity ary manome anao…
Inona no karazana menaka ampiasain'ny andrin'ny môtô?
Inona no menaka ampiasain'ny andrin'ny môtô? Azoko atao ny mampiasa SAE W10 na fifindran'ny 80 na 90W na menaka 20W 40 izay mifoka taitra ao anatiny...
1 2 ... 470 Manaraka
Salama. Michael no anarako. Mopeds, môtô, bisikileta, mazava ho azy, compact sy manoeuvrable. Saingy tsy ny fampiononana amin'ity fitaterana ity ihany, ary ao amin'ny bilaogiko dia holazaiko aminao ny zava-drehetra momba ity karazana fitaterana ity.
Ahoana no kajy ny haavon'ny MTB handlebar?
Inona no bisikileta fanatanjahan-tena novidiko hanombohana?
Valiny haingana: Inona avy ireo singa rehetra amin'ny bisikileta?
Iza no namorona ny moto voalohany?
Ny valiny tsara indrindra: Inona no fanatanjahan-tena tsara kokoa hazakazaka sa bisikileta?
Inona no atao rehefa lena ny bisikileta?
Valiny haingana: Oviana no nanaovana ny bisikileta voalohany?
© 2022 Fiainana amin'ny kodiarana roa
Contacts | momba ANAY | Tsiambaratelo sy politika momba ny cookie
TANDREMO IREO MPANAO ZO! Ny fitaovana rehetra navoaka tao amin'ny tranokala dia natao ho an'ny tanjona fampahafantarana sy fanabeazana! Raha mino ianao fa manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona ny fandefasana fitaovana rehetra, azafady azafady mba hifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny taratasy fifandraisana dia hesorina ny fitaovanao.